Multipass 1.9 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny MacOS, fiarovana ary maro hafa | ubunlog
Tonga ny Multipass 1.9 miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny MacOS, fiarovana ary maro hafa
Canonical developers vao haingana namoaka ny dikan-teny vaovao amin'ny tetikasa Multipass 1.9, izany hoe mpitantana VM-cross-platform maivana (miasa amin'ny Linux, Windows ary macOS). Multipass dia natao ho an'ny mpamorona izay maniry tontolo Ubuntu vaovao miaraka amina baiko tokana.
Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana dia natao hanatsorana ny fametrahana ny dikan-teny samihafa amin'ny Ubuntu amin'ny milina virtoaly mandeha amin'ny rafitra virtoaly Linux, Windows ary macOS.
multi-pass esory tsy miankina ny sary dikan-teny ilaina amin'ny rafitra miasa ary mitazona azy io ho vaovao. cloud-init dia azo ampiasaina amin'ny fanamafisana, Ankoatr'izay azo atao ny mametraka partitions disk ivelany amin'ny tontolo virtoaly, fa ny fitaovana hamindrana rakitra tsirairay eo anelanelan'ny rafitra fampiantranoana sy ny milina virtoaly dia omena koa.
1 Zava-baovao lehibe amin'ny Multipass 1.9
2 Ahoana ny fametrahana Multipass amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
2.1 Fampiasana fototra ny Multipass
Zava-baovao lehibe amin'ny Multipass 1.9
Ny dikan-teny vaovao an'ny Multipass 1.9 miavaka amin'ny fitomboan'ny fiarovana miaraka amin'ity dikan-teny ity rehefa mamela ny fanamarinana mpanjifa. Ity endri-javatra ity dia ahafahana mampandeha ny Multipass ho mpampiasa tsy mpitantana, izay mametra ny tombontsoa azonao amin'ny milina.
Raha ho an'ny lampihazo macOS, niasa ny mpamorona mba hahafahana manampy ny fanohanana ny fametrahana milina virtoaly hatory ary ny fahafahana manomboka rahona kely eo an-toerana (fampifandraisana ny tontolo virtoaly mandeha amin'ny fifandraisan-davitra amin'ny rafitra mpampiantrano mba handrindrana ny fidirana amin'ny milina virtoaly avy amin'ny tambajotra ivelany) dia nampiana nomanina.
Ny fanovana iray hafa misongadina amin'ity dikan-teny vaovao an'ny Multipass 1.9 ity dia ny tambajotra nohatsarainatsara izao Ny tranga dia azo ampifandraisina amin'ny fifandraisana amin'ny tambajotra fanampiny misy amin'ny milina mpampiantrano, mahatonga azy ireo ho azo idirana amin'ny tambajotra rehetra azon'ny milina mpampiantrano idirana. Amin'ny teny azo ampiharina, midika izany fa azo idirana lavitra amin'ny macOS izao ny tranga, manokatra fahafahana bebe kokoa amin'ny fanaovana prototyping fampiharana ao amin'ny rahona.
Ankoatra izay dia marihina ihany koa fa nanome ny fahafahana mampandeha Ubuntu 22.04 amin'ny macOS sy Windows.
farany raha ianao liana hahafantatra bebe kokoa momba izany momba an'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny pitsopitsony Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana Multipass amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo liana amin'ny fahaizana mametraka ity fitaovana ity amin'ny rafitr'izy ireo, afaka manao izany miaraka amin'ny fanampian'ny fonosana Snap, izay ananan'izy ireo tsotra fotsiny ny fanohanana amin'ny fametrahana ireo fonosana ireo amin'ny rafitr'izy ireo.
Amin'ny alàlan'ny default, ny kinova farany an'ny Ubuntu dia efa misy fanohanana tafiditra, fa raha tsy manana ianao dia afaka manampy fanampiana izy ireo amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal (Azonao atao ny manao azy amin'ny bokotra hitsin-dàlana Ctrl + Alt + T) ary ao no hamakianao ity baiko manaraka ity:
Ankehitriny miaraka amin'ny fanampiana Snap izay nampiana ho an'ny rafitra, miroso amin'ny fametrahana Multipass izahay. Ny fametrahana dia hatao amin'ny alàlan'ny fanoratana ny iray amin'ireto baiko manaraka ireto ao amin'ny terminal:
Raha, ho an'ireo izay te hampiasa ny installer ho an'ny Windows na Mac OS dia afaka mahazo azy ireo amin'ny tranokala ofisialin'ny tetikasa izy ireo. Ny rohy dia ity.
Fampiasana fototra ny Multipass
Alohan'ny hampiasana ilay fitaovana Zava-dehibe ny milaza ary tsarovy izany multipass dia miasa amin'ny haitao fampirantiana araka ny voalaza tany am-boalohany, noho izany dia tsy maintsy alefanao avy amin'ny bios anao izany ary manamarina fa ny kmv dia alefa ao amin'ny rafitra.
Manomboka mampiasa ilay fitaovana ny hany mila ataonao dia ny manokatra terminal ary mampiasa ny baiko "multipass" miaraka amin'ireo baiko mifandraika amin'izany.
Azontsika atao izany amin'ny fampiharana ny baiko:
Mikaroka ireo sary misy, afaka manao izany amin'ny baiko isika:
Izay hiseho ireo misy. Fantatsika izany, hanatanteraka ny fametrahana miaraka amin'ny baiko isika:
Eto ianao dia afaka manondro izay kinova hampiasana, amin'ny fampiasana ny anarana fototra, fa ity tranga ity dia xenial (ubuntu 16.04).
Hampahafantarina antsika isika raha te handefasana data tsy fantatra anarana momba ny fampiasana ilay fitaovana, izay amalian'izy ireo amin'ny (eny / tsia).
Ary vonona. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fampiasana Multipass ianao dia afaka mitsidika ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Tonga ny Multipass 1.9 miaraka amin'ny fanatsarana ho an'ny MacOS, fiarovana ary maro hafa
Efa nivoaka ny DeaDBeeF 1.9.0 ary ireo no vaovao